Israsaasayn xalay ka dhacday Magalaada JigJiga iyo qalalaase siyaasadeed oo jira - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Israsaasayn xalay ka dhacday Magalaada JigJiga iyo qalalaase siyaasadeed oo jira
Israsaasayn xalay ka dhacday Magalaada JigJiga iyo qalalaase siyaasadeed oo jira
Sida ay sheegayaan dad Goobjoogayaal ahm agalaada Jigjiga ee gobolka Fafaan a waxaa xalay laga maqlayay rasaas qabya kamida magalaadaasi. Dhawaaqa rasaastaan ayaa waxa ay ka imaanaysay Xafaada Ableelaha ilaa Hotel Xamda iyo wadada halbawlaha ah ee lamida dhex marta magalaada ayuu xabada ka dhacay siida ay sheegan goobjoogyal oo la hadlay Halgan Media.
Ilaa iyo hada lama oga sababta lakiin dad dhalinyaro ah oo banaan baxaaya ayay iska hor yimaadeen ciidanka amaanka.Rasaasta xalay la maqlay ayaana ku soo aadeysa iyadoo Xaalada degaanka ay tahay mid cakiran.
Siyaasada deegaanka Soomaaliya ayaa waxa uu u muuqdaa in uu yahay mid galay xaalad cusub oo keeni karta in halkaas uu ka qarxi dagaal sokeeye. Waxaa socda loolan u dhaxeeyo qabaa’iilada dega degaanka iyo madaxada hada haysa xukunka.